Ama-Podcasters nama-Blogger - Ukuboniswa okulula okulula - izimpawu zedijithali
Nikeza ababukeli bakho okuhle kakhulu!
"Nge-Easy Multi Display, ngingahlinzeka ababukeli bami ngokuhamba phambili!"
Owayengumcimi-mlilo, umsunguli wamabhizinisi amaningi kodwa futhi ongusomabhizinisi ne-podcaster, uPaul Abercrombie unezintambo eziningi emnsalweni wakhe futhi uyisibonelo salokhu "komuntu ozenzele yena". Namuhla wabelana ngesipiliyoni sakhe nezithameli zakhe ngama-podcast amaningi aphumelele!
Ukuze anelise umphakathi wakhe, uthathe isinqumo sokuthenga isisombululo sethu se-Easy Multi Display ngezikrini zakhe eziyi-6 ukukhombisa imidiya nemibhalo ngesikhathi sama-podcast akhe.
I-Easy Multi Display imnika ukufinyelela kuzinketho eziningi ezifana nomsebenzi wokuhlela, umyalezo wombhalo noma umsebenzi womsebenzisi!
Iwebhusayithi kaPaul Abercrombie
UMnu Abercrombie usebenzisa i-Easy Multi Display kuma-podcast akhe ukudlulisa imiyalezo emphakathini wakhe.
Wayefuna isoftware ephelele yokunikeza okuhle kakhulu emphakathini wakhe! Ngakho-ke wakhetha i-Easy Multi Display nezici zayo eziningi okwenza kube ngenye yezinto ezihamba phambili emakethe.
Thuthukisa ulwazi lwezibukeli zakho
Dlulisela imininingwane kubabukeli bakho kalula ngokusakaza amavidiyo, izithombe noma amadokhumenti ngesikhathi sama-podcast akho!